Nweta Onwe Gị Akaụntụ Swag | Martech Zone
Tọzdee, Febụwarị 23, 2012 Monday, March 5, 2012 Douglas Karr
Anyị hụrụ n'anya swag. anyị inbound ahịa gị n'ụlọnga nyere iwu ka swag mbụ anyị nwee n'afọ gara aga - a ọmarịcha obere akwụkwọ maka ndị bịara nzukọ. Afọ a anyị zụtara ụfọdụ jụụ 2Gb USB draịva ndị ahụ bụ otu ọdịdị na nha nke igodo ka i wee tinye ha na igodo gị. Ọ bụrụ n ’ịkwụsị n’ụlọ ọrụ anyị, ị nwere ike nweta otu!
Kedu ihe bụ swag? Ọ bụ ngwongwo, ịkwakọrọ, ihe nkwata, ịkwakọrọ… akụ̀ ị nwetara n'aka ụlọ ọrụ na nloghachi maka ileta ụlọ ndò ha, na-enyere ha aka n'ịntanetị, ma ọ bụ naanị ịbụ ndị enyi mmadụ nwere igodo nke mkpuchi swag. Laa azụ na ntụpọ com heyday, echetara m na m na-apụ na ọgbakọ na swag karịa ka m nwere ike iburu, agụnyere bụ wireless wireless na òké si Microsoft!
Swag nwere ezi uche karịa n'oge a na azụmahịa ndị gbara ya gburugburu na-agbanwe. N’izu a ka m na-agwa ọtụtụ ndị otu okwu WPEngine (Onye guzobere ya Jason Cohen nọ na redio anyị na-egosi ọbịa Fraịdee) yabụ enwetara m azịza dị jụụ na aro m nyere ha. Enwetara m njikọ SwagLove ịhọrọ otu ngwaahịa ma nyefee m ya ozugbo!
Nke a bụ otu SwagLove si arụ ọrụ
Debanye aha n'efu, họrọ ihe onyinye nkwado gị, bulite ma debe ihe osise ọdịnala gị.
Nweta njikọ gị wee zigara ha ndị ịchọrọ ịtọ ụtọ
Ndị nnata na-eso njikọ gị gaa na peeji ọdịda aha gị ebe ha tinye adreesị ha na adreesị mbupu ha
Anyị na-elekọta obibi akwụkwọ, mbupu, kọstọm na ọrụ ndị ahịa, ọ bụrụ na anyị enwere nsogbu ọ bụla (dị ka 'oops, m nyere iwu na-ezighi ezi!')
Only na-akwụ ụgwọ naanị maka ịgbapụta ego ka ị ghara ịla n'iyi na uwe elu ma ọ bụ penny
Kedu ka nke ahụ si dị mma? Kama ịzụta a igbe nke Swag na i nwere ike na-agba ma ọ bụ nwere ike ọ gaghị enwe ike inye pụọ, ugbu a ị nwere ike dị na-enweta ego gị SwagLove akaụntụ na-akwụ dị ka ị na-aga! Onye ahịa gị na-ahọrọ Swag ha chọrọ! Dị jụụ!
Tags: ezi ndị ahịaụgwọ ọrụ ndị ahịaswagakaụntụ swagswaglove
Daalụ maka mkpu! Obi dị m ụtọ na ọrụ anyị na-amasị gị. Ọ bụ ezigbo mgbanwe ịhapụ ụzọ nke ụlọ ọrụ na-eweta ngwaahịa nkwado, mana ụlọ ọrụ weebụ dị ka ha na-anabata ya.
Anyị na-amalite ịhụ ụfọdụ ezigbo ọmarịcha ahịa ahịa ngwá ahịa. Companiesfọdụ ụlọ ọrụ dịka WPEngine na-enye ndị ahịa ọhụụ swag n'efu dịka akụkụ nke usoro ntinye aha. Ndị ọzọ na-eji swag dịka akụkụ nke mgbasa ozi inweta ndị ahịa. Dị ka ihe atụ, “ọ bụrụ na ị debanye aha maka nnwale efu anyị ga-enye gị uwe elu a dị ka onyinye efu”. Ndị na-agbanwe agbanwe n'ezie na-ewere ya ọbụlagodi ma jiri mkpọsa mkpọghachị gosipụtara ahịa na-akpali ndị mmadụ ịlaghachi na saịtị ahụ ma debanye aha ha. Eluigwe oke oke. Nke a bụ mmalite. Enwere ụzọ dị iche iche maka ndị ahịa ọ bụla na-eji azụmaahịa anụ ahụ (swag) azụ ahịa ha. Ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị na-ere ahịa ịntanetị na ụlọ ọrụ ịntanetị anaghị ezigara ndị ahịa ha ihe ọ bụla, ọ bụ ihe ịtụnanya na-enweta ihe anụ ahụ sitere na ụlọ ọrụ mebere. Ọ na-ahapụ mmetụta na-adịgide adịgide n'ezie.
Ọ bụrụ na gị ma ọ bụ ndị na - agụ akwụkwọ gị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ chọọ ijikọ m ahịa, m ga-enwe ọ toụ inyere aka n'agbanyeghị etu m nwere ike!